Bilayska Norway oo sheegay in ay kordheen khasaaraha ka dhashay weeraradii shalay. – Radio Daljir
Bilayska Norway oo sheegay in ay kordheen khasaaraha ka dhashay weeraradii shalay.
Oslo, July 23 – Bilayska waddanka Norway ayaa sheegay inuu kor u kacay khasaarihii ka dhashay weeraradii lala bartilmaameedsaday xero ay leeyihiin dhalinyarada xisbiga shaqaalaha ee dalkaasi Norway oo ku taalla jasiirad u dhow magaalada caasimada ah ee Oslo iyo qarax ka horreeyey weerakaasi oo ka dhacay Olso laftigeeda saacado uun ka hor weerarka lagu qaaday xerada dhalinyarada.
Inta la hubo 87 ruux ayaa ku dhimatay weerarka lagu qaaday goobta lagu tamashleeyo ee waddankaasi Norway, halkaasi oo nin hubaysani uu ku furay rasaas aad u badan xilli boqolaal ruux oo dhallinyaro u badan ay ku nassanayeen.
Qarax isaguna ka dhacay magaalada Oslo ee xarunta dalka Norway, laguna weeraray xarunta dawladda oo ay xafiisyo badan ku lahaayeen R/wasaraha iyo qaar badan oo ka mid ah golihiisa ayaa la sheegay in ay ku dhinteen illaa 7 ruux.
Ciidamada ammaanka ee Norway ayaa su?aalo weydiinaya nin 32 jir ah oo reer Norwey ah oo la aaminsanyahay in uu lug ku-lahaa weeraradaasi. Ninkaan ayaa lagu qabtay jasiirada Utoey, waxaana uu ku eedeysanyahay in uu xabbado ku furay dadka dhintay ee dhalinyarada ah.
R/wasaaraha dalka Norwey Jens Stoltenberg oo xafiisyadiisu kamid ahaayeen meelaha sida xun qaraxu u waxyeeleeyey ayaa dhacadadaasi ku tilmaamay mid fuleynimo ah, isagoo wacadna ku maray in lala xisaabtamidoono kuwii soo agaasimay weeraradan arxan-darrada ah ee lagu waxyeelaynayo dimuquraadiyada Norwey.
Ma jirto koox sheegatay masuuliyadda weerarradaan, laakiin warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegaysa in laga shakisanyahay kooxaha xagjirka ah ee garabka bidix.
Dalalka kala ah Maraykanka, Britain, Fransiiska, Talyaaniga, Sweden, Austria, Germeny iyo midowga Europe ayaa lahjado adag ku canbaareeyey weerarada lagu qaaday dalka Norway, iyagoo dalbaday in caddaaladda la horkeeno dadkii ka dameeyey weerada dhimashada badan keenay ee gilgilay dalkaasi.